SOOMAALIDU SAL FUDUDAA!!!
Damacyada Daahdoon ee Itoobiya – Daawo Documentary Ka Faaloonaya Dagaalka Somalia Iyo Ethiopia
Taliyihii Guutada 8aad iyo 14 askari oo ku dhintay weerar ka dhacay duleedka Baydhabo [Warbixin].
Chris Reynolds: Muqdisho Waxaa Kasocda Iqtiyaalaat Afka Leyska Gelinayo Xabadda Iyo Qaraxyo Joogta ah
Guddoomiyihii hore ee deegaanka Qooqaani oo ladilay iyo askari ilaala u ahaa oo laqafaashay.
Saturday July 11, 2020 - 12:30:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Soomaalidu inteeda badani ma aha dad aad u hubsada waxa jira inyar oo Alle (swt) u naxariistey mooyee. Hadda ka hor ayaa xilli abaar bahgooya ah ay jirto, nin tuug ahi damcay in uu reer xado, muskana u soo galay si uu xerada xoolaha u dhaco oo uu ugu
Soomaalidu inteeda badani ma aha dad aad u hubsada waxa jira inyar oo Alle (swt) u naxariistey mooyee. Hadda ka hor ayaa xilli abaar bahgooya ah ay jirto, nin tuug ahi damcay in uu reer xado, muskana u soo galay si uu xerada xoolaha u dhaco oo uu ugu yaraan neef caawa la boodo.
Isaga oo aan weli tallaabo qaadin ayaa waxa samada ka hillaacay roob, aan la filayn waayo waxa ay ahayd xilli jiilaal dheere ah. Tuuggii inta is illaaway oo farxaddii ka badatay markii uu hillaaca arkay ayaa la soo booday Alla waa hillaac. Reerkii oo iyana faraxsan, balse la yaabay ninka muska ku jirey oo hillaacu fashiliyey ayaa ugu jawaabay tuuggii "Tuugow yaa
hillaaca kula ogaa?".
Haddaba shalay galab ayaa Xasan Cali Kheyre la soo booday isaga oo la hadlaya golihiisa wasiirrada in ay doorashadu xilligeedii dhacayso. Waxa iyana ay warqadi ka soo baxday xafiiskiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo taageero u muujinaysa hadalkii Khayre.
Haddaba xaggee ayey ku qorneyd ama lagu sheegay in aan doorasho ku dhacayn xilligeedii, maxaase hadalkooda iyo kan qolyaha ku shiraya Dhuusamareeb kulmiyey. Haddaba warku sow uma eka "tuugow yaa hillaaca ku la ogaa". Aragtideyda waxa ii muuqatay inkasta oo afka lagala baqayey in ay jirtey tuhunka ah in hunguri kaga jirey muddo kororsi qolyaha Villa Somalia, balse aan la caddeysan karin oo lala dhuumanayey.
WQ Dr Suldaan Garyare
Sidee Soomaalidu u aragtaa weerarkii Xooganaa ee lagu qaaday saldhigga ciidanka Mareykanka ee Balidoogle! .
Dhageyso: Aqoon yahan ka hadlay fashilka farmaajjo iyo in soomaalidu dhibaato gacmaheeda ku Doonatay.
War SomaliMeMo Baahisay oo Muujiyay Sida Soomaalidu Ujecleyd Sh.Mukhtaar Abuu Zubeyr 80,000 Booqasho Ah.